Xaflad Lagu xusaayay Maalinta Haweeenka Aduunka 8March oo lagu qabtay Qasriga Madaxtooyada ee Magaalada Hargeysa | WWW.SOMALILAND.NO
Xaflad Lagu xusaayay Maalinta Haweeenka Aduunka 8March oo lagu qabtay Qasriga Madaxtooyada ee Magaalada Hargeysa
Posted on Maarso 9, 2008 by weriye1
Xaflad aad u balaadhan oo lagu xusaayay Maalinta caalamiga ah ee Haweenka Aduunka ayaa xalay lagu qabtay xarunta Qasriga Madaxtooyada,
xaflada waxa ka soo qayb galay Madaxweynaha Somaliland Md Daahir Riyaale, Madaxweyne xigeenka Md Sh. Axmed Yuusuf Yaasiin, Marwada Madaxweynaha Huda Barkhad, xildhibaano, siyaasiyiin, qaar ka mida hay`adaha caalamiga ah ee ku sugan Magaalada Hargeysa iyo dadweyne kale.
ugu horayn waxa halkaasi ka hadashay Marwo Huda Barkhad iyada oo salaan u dirtay dhamaan haween weynaha aduunka. Marwada waxa hadalkeeda ka mid ahaa ”
“’ugu horeyn waxaan salaan Hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa guud ahaan haween-weynaha adduunka, gaar ahaana haweenka reer Somaliland dal iyo dibadba.
Waxa noo sharaf ah in aad nagala soo qayb gashaan munaasibadan qiimaha weyn leh ee aynu ku xusayno maalinta haweenka aduunka.
Waxaynu wada ogsoonahay in haweenku laf dhabar u yihiin bulshooyinka caalamka manta marka loo eego dhinacyada kobcinta dhaqaalaha , Nabad gelyada iyo siyaasada , gaar ahaan ka qayb qaadashada horumarinta dhaq dhaqaaqyada siyaasada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga ahba.
Waxa qadarin mudan doorka laxaadka leh ee ijtimaaciga ah ee ay haweenkeenu ka qaataan nolosha , waxana la dafiri Karin kaalinta muhiimka ah ee ay ku leeyihiin kobcinta dhaqaalaha iyo ka qayb qaadashada horumarinta dimuqraadiyada curdinka ee dalkeena.
Haddaba , iyada oo aan manta u dabaal dagayno maalinta haweenka adduunka waxa xusid mudan in aynu milicsano halku dhga caalamiga ah ee loo suntay maalin tan haweenka adduunka ee sanadkan 08/03/2008, taasi oo ah ‘’tacab gashiga haweenka iyo gabdhaha’’, waxa muqadas ah in aynu dejisano qorshe hufan oo udub dhaxaad iyo fure u noqon kara horumarka mustaqbal ee dalkeena.
Si aynu taas u gaadhno waxa lama huraan ah in haweenka dalkeenu meel uga soo wada jeestaan sidii ay xoogooda iyo xeelahooda u midayn lahaayeen si ay u soo saaraan waji cusub oo lagu hanan karo hadafka aynu ka leenahay ujeedooyinkeena doceed ee haweenka iyo kuwa guud ee qaranka.
Waxa nasiib wanaag ii ah caawa inaan ku gubaabiyo haweenka dalkeena in ay ka faa’iidaystaan xaqa distooriga ah ee haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada tartanka doorashooyinka.
Waxa muhiim ah in haweenku fahmo distoorka iyo xeerka doorashooyinka ee dalka’’
Marwadu waxa ay hadalkeedii ku soo gaba gabaysay ‘’Waxaan u soo jeedinayaa haweenka Somaliland inay ku dedaalaan sidii ay qayb laxaad leh oo distoori ah uga qaadan lahaayeen tartanka doorashooyinka , waxa kale oo aan codsi u soo jeedinayaa asxaabta qaranka in ay qayb libaaxle ka siiyaan haweenka tartanka doorashooyinka’’.
Intaasi ka dib waxa halkaasi lagu soo bandhigay Riwaayad ka turjumaysa doorka muhiimka ah e ay haweenkeenu ka qaataan horumarka dalka.
« FAALLO: Xaalada biyo la,aanta iyo Fadeexada ka jirta Ceelka biyaha ee DEGMADA ALLAYBADAY ee Gobolka Hargeisa AL-SHABAAB oo aan wax liisto argagixiso ah ku jirin »